कस्ता युवतीसँग विवाह गर्ने ?
उनले जीवनको हरेक क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने सम्बन्धित नीतिबारे उल्लेख गरेका छन् ।
विवाह गर्ने समय युवतीको सुन्दरता होइन कुल हेर्नुपर्छ ।
धेरै युवायुवती विवाहको समयमा सुन्दरतालाई बढी महत्व दिने गर्छन् ।
यो गलत हो । चाणक्यका अनुसार धेरै सुन्दर केटीहरु विवाहका लागि योग्य हुदैनन् । समझदार व्यक्ति उच्च कुल अर्थात् संस्कारी परिवारमा जन्मिएकी युवतीसँग विवाह गर्छन् ।
यस प्रकारका युवती कम सुन्दर हुन्छन् । यस्ता युवतीहरुसँग विवाह गर्न फलदायी हुन्छ । सुन्दर युवतीमा संस्कार छैन भने घर भाड्ने काम गर्छन् ।
कस्तो स्थानमा घर बनाउनु राम्रो ?
हामीलाई कस्तो स्थानमा घर बनाउनु राम्रो हुन्छ यसबारे पनि चाणक्यले बताएका छन् । धनीहरुको नजिक घर बनाउँदा व्यापारमा फाइदा हुनेगर्छ ।
ज्ञानी, वेद जान्ने वाला व्यक्तिहरुको नजिक घर बनाए धेरै ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । पानी भएको स्थानमा घर बनाए प्राकृतिक स्रोतहरुको ज्यादा लाभ उठाउन सकिन्छ ।